Ravinala Airports: tonga ireo “passerelles” telo vaovao hapetraka eny Ivato | NewsMada
Ravinala Airports: tonga ireo “passerelles” telo vaovao hapetraka eny Ivato
Mitohy ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato, nankinina amin’ny Ravinala Airports ny fitantanana. Eo amin’ny 70 % izao ny asa vita, herintaona mahery kely nanombohana azy.
“Saika efa voavoatra ireo asa lehibe rehetra fa tohiny izao ny famitana ny ao anatiny sy ny fampitaovana”, hoy ny talen’ny Ravinala Airports, i Nicolas Devillier. Ao anatin’izay fampitaovana izay ny fandraisana ireo “passerelles” vaovao telo, omaly, mampifandray mivantana ny fiaramanidina sy ny mpandeha, fidirana sy fivoahana.
Nohavaozina sy nitarina ny lalan’ny fiaramanidina, mahazaka karazany rehetra, anisan’izany ireo goavana, toy ny A 380, ny A 350-100, ny 747-400ER, ny 777-300ER. Efa vita tanteraka ny volana jolay 2018 teo izany lalan’ny fiaramanidina izany. Ireo “passerelles” vaovao nohafarana avy any Sina ireo natao mifandraika amina karazana fiaramanadina rehetra ireo. Nambaran’ny Ravinala Airports fa misy teknisianina manome fiofanana manokana ny eto an-toerana momba ny fampiasana ireo “passerelles” ireo. “10 izy ireo izao ny eto, miasa ho amin’izay lafiny teknika izay”, hoy i Nicolas Devillier. Nanome toky koa ity tompon’andraikitra ity fa azo antoka ny famatsiana angovo ao amin’ny seranam-piaramanidina vaovao, raha misy fahatapahana ny Jirama.
Vita 90 % ny any Nosy Be
Manamboatra fotodrafitrasa ny Colas sy ny Bouygues Bâtiment International, samy orinasa frantsay avokoa. 96 tapitrisa ny tentimbidin’ny asa eo Ivato, ankoatra ny fandaniana hafa 20 tapitrisa euros. Manampy ny eo Ivato tantanan’ny Ravinala Airports ny seranam-piaramanidina any Nosy Be. Fanavaozana tanteraka ny atao any Nosy Be, ary 90 % izao ny fandrosoan’ny asa. 15 tapitrisa euros indray ny tentimbidin’ny asa.
Vita aloha izany io Ivato sy i Nosy Be fa mbola betsaka ny fanavaozana miandry any amin’ireo seranam-piaramanidina hafa. Miankina amin’ny fitondrana manaraka eo ny hahitana ny ho fanatanterahana izany, raha hisy.